mairie-antananarivo – Cercle Mess Betongolo : Fifampiharabana tratry ny taona
Cercle Mess Betongolo : Fifampiharabana tratry ny taona
Tontosa tamin’ny Zomà faha 10 Febroary lasa teo teny amin’ny Cercle Mess Betongolo ny fifampiharabana tratry ny taona teo amin’ny Lehiben’ny boriboritany fahatelo sy ny mpiara-miasa aminy. Izany lanonana izany dia notronon’ny Solombavam-bahoaka lany teny an-toerana sy ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevitry ny tanàna eny amin’ny boriboritany fahatelo.
An-koatra ny lanonana dia nandritra io fotoana io no nanolorana fanomezana ireo mpiasa efatra handeha hisotro ronono.Teo ihany koa no nanamafisan’ny Lehiben’ny boriboritany ny lalàna mifehy ny mpiasa toy ny fanajàna ny ora fidirana sy fivoahana eny amin’ny toeram-piasana sy ny fomba fandraisana olona.
Nisy ihany koa ny fanomezana natolotra ny mpiasa mendrika tamin’ny taona 2016 ho entina hampirisihana azy ireo mba hiasa tsara hatrany. Nambaran’ny Lehiben’ny boriboritany fa hitohy hatrany izany fijerana mpiasa mendrika izany, ka ho an’ireo izay mpiasa amin’ny birao kosa dia hisy ny tombana hatao isaky ny telo volana. Izany rehetra izany no napetraka mba ho entina manavao ny fomba fiasa eny amin’ny boriboritany.